“Waan ogaa inuusan ciyaareyn Cristiano Ronaldo. Haddana waxaa Spain ii jooga saaxiibo QISH iga siinaya Real Madrid,”. Manuel Pellegrini – Gool FM
“Waan ogaa inuusan ciyaareyn Cristiano Ronaldo. Haddana waxaa Spain ii jooga saaxiibo QISH iga siinaya Real Madrid,”. Manuel Pellegrini
Byare May 1, 2016
(Manchester) 01 Maajo 2016. Tababaraha Man City Manuel Pellegrini ayaa u digay Real Madrid una sheegay inay saaxiibo u joogan Spain kuwaa oo daawanaya iyaga warbixinna ka soo siin doona ka hor kulankooda Champions League ee arbacada.
Kooxda ka dhisan Premier Leaague ayaa u safri doonta arbacada Santiago Bernabeu si ay lugta labaad ee semi-final ka koobka horyaalada Yurub ula oo ciyaaraan Los Blancos kaddib bar-barihii goolal la’aanta ee usbuucii hore lagu soo galay garoonkooda Etihad.
Pellegrini ayaa sheegay inuu ogaa in Cristiano Ronaldo dhaawac ku seegi doono lugtii hore wuxuuna digniin u diray Real Madrid isagoo sheeganaya inuu warbixin fiican ka heysto kooxdiisii hore.
“Saaxiibo badan ayaan ku leeyahay Spain,” Tababaraha reer Chile ayaa sidaa u sheegay Mirror.
“Waxaan had iyo jeer isku dayaa inaan helo warbixinada ugu badan ee ku saabsan kuwa iga soo horjeeda ka hor kulan kasta. Markii aan yeelanay kulanka kooxda subuxa kulankii Madrid, waxaan u sheegay ciyaartoyda in Ronaldo uusan ciyaari doonin.
“Waan fahansanahay waxa ku dhacaya Real Madrid waana ogahay dhaawaca Ronaldo, waxaana la arkaa inuusan dhaawac wayn ahayn.
“Laakiin way ku adag tahay iyaga inay khatar galiyaan maxaa yeelay ma oga iyaga inuu ciyaari doono shan daqiiqo intaa kaddibna ay waayi doonaan inta ka harsan xilli ciyaareedka.
“Waxa dhacaya afarta maalmood ee soo socota ayaa ka yeeli doona iyaga inay go’aansadaan, haddii uu Ronaldo heysto wax fursad ah uu ku ciyaari karo way qaadan doonaan. Waana ogaan doonaa.”.
Tababaraha Man City ayaana hadalkiisa ku soo xiray inuu ka warqabo inay ciyaar duulaan ah oo weerar badan ciyaari doonaan Real Madrid, balse uu isna meel u fadhin doonin isla markaana uu weerar ku qaadi doono bilowga ciyaartaba si uu uga helo away goal.
Massimiliano Allegri oo dib u dhigay wada hadalada heshiis kordhinta kooxdiisa
HOR DHAC: Chelsea Vs Tottenham Hotspur (Chelsea oo caawa soo af jari karta su'aashii ahayd goorma!)